Maxay ka wada hadleen Micheal Keating iyo Danjire Abuukar Cusmaan:? Akhriso – Radio Daljir
Maxay ka wada hadleen Micheal Keating iyo Danjire Abuukar Cusmaan:? Akhriso
Seteembar 23, 2018 9:21 b 0
Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey Abuukar Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa kulan wadajir la qaatay Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ee xilka baneynaya Micheal Keating iyo Ergeyga cusub Nicholas Haysom.
Kulan kooban oo Danjiraha la qaaday Labada Ergey ee xilka isku wareejinaya ayay ka wada hadleen xaalada Soomaaliya, dadaalada dowladdu wado iyo howlaha Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
“Waxaan Xafiiska igu soo booqdey Wakiilka cusub ee Xoghaya guud ee Qaramada Midoobey ee loo magacaabey arimaha Soomaaliya Ambassador Haysom iyo Wakiilkii hore Ambassador Michael Keating oo aan ka Wada hadalney habsami u socodka howlaha u dhaxeeya Qaramada Midoobey iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya”ayuu yiri Danjire Abuukar Baalle.
Micheal Keating oo xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya madax ka ahaa tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxaa uu xilka baneynaya 1-da bisha October, iyadoo wixii xilligaas ka dambeeya uu xilka la wareegi doono Wakiilka cusub Nicholas Haysom oo u dhashay Koofur Afrika.
Burcad badeeda Nigeria oo Afduubatay Markab siday Qamadi iyo shaqaalihii saarnaa
Wasiirkii deegaanka Puntland oo iscasilay iyo sababta iscasilaadiisa oo uu uga waramay Daljir (dhegayso )